ရေတင်ပန့် Electric Water Pump
These pumps are suitable for handling clean water not containing abrasive particles which are not chemically aggressive to the pump components. Reliable, economical and simple to use, they are suitable for domestic applications and the automatic distribution of water from surge tanks, watering farms and gardens and for boosting insufficient mains water pressure.These pumps should be installed inacovered area, protected against in the weather.
3 removable &amp; adjustable stainless steel shelves for easy cleaning Heated air water reservoir for humidified environment
URANUS Co., Ltd. မှ တင်သွင်းရောင်းချသည့် MNZ အမှတ်တံဆိပ် ငွေရေစက်များသည် ရာစည်းအုပ်များထဲမှ ငွေလျော့ခြင်း ကင်းဝေစေသဖြင့် အမှန်တကယ် စိတ်ချမ်းသာရမှု၊ အကြမ်းခံပြီး ငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်းများ ရေတွက်နိုင်၍ အမှန်တကယ် အသုံးဝင်မှု၊ မြန်မာငွေစက္ကူများအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် မြန်နှုန်းမြင့်ရေတွက်ရာတွင် အခြားငွေရေစက်များထက် မှန်ကန်တိကျမှု၊ (ပစ္စည်းတန်ဖိုး+လက်ခ) တစ်ကျပ်မကုန် အာမခံရက် ၁၀၉၅ ရက် (၃)နှစ် အာမခံကဒ်ပြားပါရှိမှု၊ စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်းရောင်းချ၍ စက်အပိုပစ္စည်း အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်မှု၊ ရှားရှားပါးပါးပျက်ခဲ့လျှင် ၂၄နာရီအတွင်း တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုနှင့် ခေတ္တအစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးနိုင်မှု၊ စသည့် ၀ယ်သူလိုအပ်ချက်များ အားလုံးနှင့် ပြည့်စုံပါသည်။ ငွေတစ်သောင်းနှင့်အထက် နေ့စဉ် အကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရေတွက်နေရသော လုပ်ငန်းများ (ဥပမာ-စားသောက်ဆိုင်၊ စူပါမားကတ်၊ အရောင်းပြခန်းနှင့် လက်လီအရောင်းဆိုင်များ)၊ ငွေသား ကျပ် သိန်းဆယ်ဂဏန်းမှ ရာဂဏန်းအထိ နေ့စဉ်စာရင်းရေးသွင်းတွက်ချက်နေရသော ကုမ္ပဏီများ၊ တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများဖြင့်လည်းကောင်း ၀င်ငွေရှာ၍ ၀ယ်သူ စိတ်ကျေနပ်မှုအား အထူးအလေးထားသည့်လုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ်များ၊ အချိန်နှင့်အမျှ ၀င်ငွေရှာပေးနိုင်သည့် ၀န်ထမ်းများ၏ အဖိုးတန်လုပ်ငန်းချိန်များအား အကျိုးရှိရှိ ထိထိရောက်ရောက် သုံးစွဲလိုသည့် ကုမ္ပဏီများ၌ သုံးစွဲရန် အထူးသင့်လျော်သည်။ MNZ ငွေရေစက် အမျိုးအစားကွဲပြားမှုများ MNZ ငွေရေစက်၏ အမျိုးအစားကွဲပြားမှုပေါ်မှုတည်၍ ငွေစက္ကူ ရွက်ရေတစ်ရာလျှင် ရေတွက်နှုန်းမှာ ၂.၆ စက္ကန့်မှ ၆စက္ကန့်အတွင်း ရေတွက်နိုင်ခြင်း၊ ကျပ်ငွေနှင့် ဒေါ်လာ ငွေစက္ကူ အတု/အစစ် ခွဲခြားပေးနိုင်ခြင်း၊ ရေတွက်လိုသော ပမာဏအား ကြိုတင် Set လုပ်ထားနိုင်ခြင်း၊ Speed အနှေး အမြန် အလိုအလျောက် ချိန်ပေးနိုင်ခြင်း၊ စက်ပျက်ခြင်း (သို့) error တက်ပါက error report ပေးနိုင်ခြင်း၊ စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်စွမ်းကို မူတည်၍ တန်ဖိုးကွာခြားပါသည်။ MNZ ငွေရေစက်၏ အာမခံ MNZ ငွေရေစက်၏ အာမခံ(၃)နှစ် အပြည့်မှာ ပစ္စည်းတန်ဖိုး (၃)နှစ် အခမဲ့ + လက်ခ အခမဲ့ (၃)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားငွေရေစက်များ၏ အာမခံ(၃)နှစ်မှာ ပစ္စည်းတန်ဖိုး (၁) နှစ် အခမဲ့ + လက်ခ အခမဲ့ (၂) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ MNZ ငွေရေစက်တန်ဖိုးအား တစ်ကျပ်မကုန် အာမခံရက် ၁၀၉၅ ရက်မျှနှင့် စားကြည့်လျှင်ပင် တရုတ်အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုထုတ် ငွေရေစက်များထက် တန်လွန်းမကတန်နေပြီး ပိုမို စိတ်ချမ်းသာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံနိုင်ပါသည်။ MNZ ငွေရေစက်၏ အထူးဝန်ဆောင်မှု အထူးဝန်ဆောင်မှု အနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့် ၁၀နှစ်မှပဲ ၀ယ်ဝယ်၊ ပြုတ်ကျပြီးပဲ ကွဲထားထား၊ MNZ အမှတ်တံဆိပ်ဆိုလျှင် တစ်ကျပ်မကုန် (ပစ္စည်းတန်ဖိုး+လက်ခ လုံးဝ အခမဲ့) နှုန်းထားဖြင့် ၂၄နာရီ အတွင်း တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနေပါသည်။ MNZ ငွေရေစက်ကို နယ်မှ ၀ယ်ယူလိုပါက ဘဏ်မှ ငွေလွှဲလိုက်ရုံဖြင့် စက်သီးသန့် (သို့) ၀န်ထမ်းနှင့် အတူ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဖုန်းဆက်မှာယူရုံဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အရောက် ရှင်းလင်းပြသရောင်းချပေးနိုင်ပါသည် အထူးဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် ဘယ်မြို့ဖြစ်ဖြစ် အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
A well established portable test method for the determination of moisture content of soils, sand and fine aggregates. The procedure involves the reaction between water and calcium carbide which when mixed together give offagas. The amount of gas is directly proportional to the amount of water present in the sample and results in percentage are taken fromapressure gauge. The tester is supplied complete with electronic balance, brushes and measure inaplastic carrying case. Two versions available: 47-T0023/A 20 g cap., and 47-T0024/A6g cap.
10430 ~ 10430 $
Descriptions The Gelato Pro 12K highlights various advanced functions, but remain very easy to use. - It isavery powerful machine with frontal production extraction system. - With the Gelato Pro 12K it is possible to vary the rotation speed ( 60 to 130 rpm) of the mixing paddle for the best results of each recipe! - The mixing paddle motor is controlled with an electronic inverter. - The Gelato Pro 12K is equipped with brakes fitted wheels making it easy to move where needed. - The AISI 304 stainless steel mixing paddle features adjustable scrapers. - Air cooling Makes - 2,5 Kg (2,5 Qt.) / Cycle - 12 Kg (2,5 Qt.) / h
Water level indication for easy fillingWater level indication for easy filling Fill the water tank easily and precisely with the water level indication. Good drip filter coffee, easily prepared Holds4to6cups, compact design With glass jug Black Enjoy good filter coffee with this reliable Philips coffeemaker withasmart and compact design for easy storage.Smart and compact design - Water level indicator - A reliable coffee maker - Aroma Swirl Circulates the coffee for an optimal spread of taste - Drip Stop Interrupt the brewing whenever you want to pouracup of coffee - Simply delicious coffee - Dishwasher - safe parts for easy cleaning နယ်သာလန်နိုင်ငံ brand, (၂)နှစ် အာမခံ PHILIPS Electronics ပစ္စည်းများ မြန်မာပြည်ဖြန့်ချိရေး တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် - ထူးခြားအောင်ကျော် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Temperature from 30° ~ 100°C 2. Removable stainless steel shelves for easy cleaning 3. Comes with thermostat control and timer function 4. Buzzer alert system sounds when water level runs low 5. Auto power cut off when water tank is empty 6. Equipped with internal lamp for attractive display
Sumitomo Excavator SH-210-5
Flagship model of Sumitomo 20 Ton class. The advantage of Hydraulic Excavator &quot;LEGEST&quot; 20 ton class is the Efficient Fuel and have passed many tests. This class excavator awarded in the field of energy conservation &quot;Top Choice for Energy Conservation&quot; awarded by the Ministry of Economy Trade and Industry of Japan and awards in the field of design &quot;Good Design Award&quot;.
BuyaBrand New Toshiba E-STUDIO 2309A Monochrome Multifunction Printer Now smaller businesses can think bigger thanks to the new Toshiba ® e-STUDIO 2309A. This powerfully impressive multifunction product delivers black and white output at up to 23 pages per minute and scans 22 full color pages per minute. The Reversing Automatic Document Feeder (RADF) and Automatic Duplex Unit (ADU) enable easy two-sided copying and printing too